Tirinta Codadka Doorashada Jabuuti oo Lasoo Gaba-gabeeyay
Home Somali News East Africa Tirinta Codadka Doorashada Jabuuti oo Lasoo Gaba-gabeeyay
Tirinta Codadka doorashada dalka Djibouti ayaa lasoo gaba gabeeyay habeenimadii xalay, iyadoo mucaaradku ay heleen codad badan.
Wasiirka arimaha gudaha ee Djibouti, Xasan Dharaar Hufane, oo goordhoweyd ku dhawaaqay natiijo horudhac ah ayaa sheegay in xisbiga isbahaysiga ee talada haya UNP ay heleen 49% codadka magaalada Jabouti, oo ay ka codeeyeen dadka ugu badan, halka mucaaradkana ay ka heleen 47%.
Mucaaradka Djibouti ayaa sheegay in wax isadaba marin ay dhacday, ergooyinka dusha ka eegaya doorashadaasina wali wax war ah kama soo saarin doorashadan iyo sida ay u dhacday.
Gudiga madaxa banana wali si rasmi ah uguma dhawaaqin natiijada doorashooyinka, waxaana aad u adag in si rasmi ah loo ogaado sida ay xisbiyada u kala heleen natiijada.
Qaanuunka cusub ee dalka Djibouti ayaa dhigaya in Cidii heshaa kuraasta ugu badan baarlamaanka dalkaas 80% ay heleyso aqlabiyada, halka 20% ee soo hartayna ay ku tartamayaan axsaabta kale ee aqlabiyada laga helay.
Waxaa xusid mudan, in doorashadaan ay tahay tii ugu horeysay oo ay ka qayb galaan mucaaradka dalkaas, iyagoo qaadacay dhowr jeer oo hore, laakiin markaan waxaa muuqata ineey ka wada qayb qaadanayaan dhamaantood, sida natiijada ka muuqatana waxay heleen tiro aad u fiican taasoo dalka Djibouti uga dhigan wax aad u fiican oo weyn, waxaana muuqda in isabadal weyn uu dhacay oo dhanka dimoqraadiyada ah.
Aqristayaasheena sharafta leh waxaan uballan qaadeeynaa inaan usoo gudbin doono wixii kusoo kordha doorashooyinka dalka Djibouti aynu walaalaha nahay insha ALLAAH.